ဒီဇနီးမယား (၇) မျိုးမှ ဘယ်လိုဇနီးမယားမျိုး ဖြစ်ချင်ပါသလဲ..? လိုချင်ပါသလဲ..? - APANNPYAY MEDIA
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ဒီဇနီးမယား (၇) မျိုးမှ ဘယ်လိုဇနီးမယားမျိုး ဖြစ်ချင်ပါသလဲ..? လိုချင်ပါသလဲ..?
ဒီဇနီးမယား (၇) မျိုးမှ ဘယ်လိုဇနီးမယားမျိုး ဖြစ်ချင်ပါသလဲ..? လိုချင်ပါသလဲ..?
Apann Pyay 2:57:00 AM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ
ဇနီးမယား (၇) မျိုးဆိုတာ
။ယောက္ခမနဲ့ လင်သား ကိုရိုသေရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ဇနီးမယားဆိုးတစ်ယောက်လို့ပြောရမှာပါ။ ဒါကြောင့်အနာထပိဏ် သူဌေးကြီင်္းက သူရဲ့ချွေးမဟာ သူ့သားအတွက် ဘယ်လို ဇနီးမယားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုတာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို မေးမြန်းလျှောက်ထား ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က သုဇာတာ သင်သည် အဘယ်သို့သော ဇနီးမယားဖြစ်သည်ကို သိစေလိုတာနဲ့ ဇနီးမယား(၇)မျိုးကိုဟောတော်မူပါတယ်။
(၂) စောရီ ဘရိယာ(ခိုးသူနှင့်တူသော မယား)
(၅) ဘာဂိနီ ဘရိယာ(နှမနှင့်တူသောမယား)
(၆) သခီ ဘရိယာ(အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော မယား)
ထိုထိုသော ဇနီးမယား(၇)မျိုးထဲမှ “သုဇာတာ” သင်သည်အဘယ်သို့သောဇနီးမယား ဖြစ်ချင်သလဲလို့မေးတော့ သုဇာတာက ကျွန်ကောင်းတစ်ယောက်နှင့်တူသော ဇနီးဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံပါမည်ဟုလျှောက်ထား ပါတယ်။
ဒီပိုစ့်လေးကိုဖတ်မှတ်ပြီး မိန်းကလေးများလည်း လူသတ်ကောင်နှင့် တူသောဇနီး၊ခိုးသူနှင့်တူသောဇနီး၊ သခင်နှင့်တူသော၊ ဇနီးမျိုးမဖြစ်အောင် အတုယူရမှာ လိုက်နာရမှာဖြစ်သလို ယောင်္ကျားလေးများအနေနဲ့လည်းမိမိရွေးချယ်မယ့် အိမ်ထောင်ဖက်ကို ထိုခိုးသူနှင့်တူသော၊လူသတ်ကောင်နှင့်တူသော၊သခင်နှင့်တူသော ဇနီးမယားမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး မိခင်နှင့်တူသော ၊နှမနှင့်တူသော၊အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တူသော၊ ကျွန်ကောင်းတစ်ယောက်နှင့်တူသော မိန်းကလေးမျိုးကိုရွေးချယ်ရမည်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သိစေချင်တာနဲ့ အသိပေးရေးသာလိုက်ရပါသည်။
ဇနီးမယား (၇) မြိုးဆိုတာ
မွတျစှာဘုရားရှငျသီတငျးတျောမူတဲ့ ဇတေဝနျကြောငျးတျောကွီးရဲ့ ကောငျးဒါယကာ အနာထပိဏျသူဌေးကွီးမှာ သုဇာတာဆိုတဲ့ခြှေးမတဈယောကျရှိပါတယျ။ထိုသုဇာတာ သတို့သမီးက လငျဖွဈသူရဲ့ ပွောဆိုဆုံးမမှုကို မနာခံသလို၊ယောက်ခမဖွဈသူရဲ့ ဆုံးမ စကားကိုလညျး ကလနျကဆနျပွနျလုပျပွီး ရနျတှတေ့တျတယျ
။ယောက်ခမနဲ့ လငျသား ကိုရိုသရေကောငျးမှနျးမသိဘူး။ဇနီးမယားဆိုးတဈယောကျလို့ပွောရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့အနာထပိဏျ သူဌေးကွီင်ျးက သူရဲ့ခြှေးမဟာ သူ့သားအတှကျ ဘယျလို ဇနီးမယားဖွဈတယျဆိုတာသိလိုတာနဲ့ မွတျစှာဘုရားရှငျကို မေးမွနျးလြှောကျထား ပါတယျ။ မွတျစှာဘုရားရှငျက သုဇာတာ သငျသညျ အဘယျသို့သော ဇနီးမယားဖွဈသညျကို သိစလေိုတာနဲ့ ဇနီးမယား(၇)မြိုးကိုဟောတျောမူပါတယျ။
(၂) စောရီ ဘရိယာ(ခိုးသူနှငျ့တူသော မယား)
ထိုထိုသော ဇနီးမယား(၇)မြိုးထဲမှ “သုဇာတာ” သငျသညျအဘယျသို့သောဇနီးမယား ဖွဈခငျြသလဲလို့မေးတော့ သုဇာတာက ကြှနျကောငျးတဈယောကျနှငျ့တူသော ဇနီးဖွဈအောငျ ကငျြ့ကွံပါမညျဟုလြှောကျထား ပါတယျ။
ဒီပိုဈ့လေးကိုဖတျမှတျပွီး မိနျးကလေးမြားလညျး လူသတျကောငျနှငျ့ တူသောဇနီး၊ခိုးသူနှငျ့တူသောဇနီး၊ သခငျနှငျ့တူသော၊ ဇနီးမြိုးမဖွဈအောငျ အတုယူရမှာ လိုကျနာရမှာဖွဈသလို ယောကငြ်ျားလေးမြားအနနေဲ့လညျးမိမိရှေးခယျြမယျ့ အိမျထောငျဖကျကို ထိုခိုးသူနှငျ့တူသော၊လူသတျကောငျနှငျ့တူသော၊သခငျနှငျ့တူသော ဇနီးမယားမြိုးကို ရှောငျကွဉျပွီး မိခငျနှငျ့တူသော ၊နှမနှငျ့တူသော၊အဆှခေငျပှနျးနှငျ့တူသော၊ ကြှနျကောငျးတဈယောကျနှငျ့တူသော မိနျးကလေးမြိုးကိုရှေးခယျြရမညျဆိုတဲ့ အကွောငျးကို သိစခေငျြတာနဲ့ အသိပေးရေးသာလိုကျရပါသညျ။